कहाँसम्म पुग्ला ‘विनिङ मेसिन’ इटाली ? – Nepal Press
२०७८ असार ४ गते १२:५०
काठमाडौं । मुख्य प्रशिक्षक रोबर्टो मान्सिनीको नेतृत्वको इटालियन टोली युरो २०२० का नकआउटमा स्थान सुरक्षित गर्ने पहिलो टोली बन्यो । र, ‘इनफर्म’ ‘अज्जुरी’को यो नतिजा कुनै अप्रत्याशित सफलता भने होइन । अन्तिम पटक गोल खाए यता ३० गोल गरिसकेको इटालीले बुधबार राति स्वीटजरल्यान्डलाई पराजित गरेसँगै लगातार १० खेलमा जित निकालेको छ ।
त्यति मात्र होइन, उत्कृष्ट लयमा रहेको इटालीले पछिल्ला १९ खेलमा ५९ गोल ठोकेको छ भने तीन गोल मात्रै खाएको छ । अहिले इटाली पछिल्ला २९ खेलमा अपराजित छ भने ती खेलमा ८० गोल ठोकिसकेको छ । र, उपाधिका लागि उनीहरूको भोक स्वभाविक छ । सबै ‘स्ट्याट्स’ उनीहरूको पक्षमा भए पनि प्रतियोगिता अगाडि बढ्दै जाँदा रोबर्टो मान्सिनिको टोली कहाँसम्म पुग्छ भन्ने सवाल पैदा भएको छ ।
‘अज्जुरी ‘विनिङ मेसिन’ हुन्’
युरो २०१२ को फाइनलमा पराजित भए यता विश्व फुटबलका ठूला प्रतियोगितामा खासै प्रभाव पार्न नसकेको इटालीले पहिलो पटक युरोपियन च्याम्पियनसिपका सुरुआती दुई खेलमा ३-०, ३-० को जित निकाल्न सफल भयो । युरोको उद्घाटन खेलमा टर्कीविरुद्ध शानदार सुरुआत गरेका इटालीले दोस्रो खेमला स्वीटजरल्यान्डविरुद्ध पनि सोही नतिजा दोहोर्‍याएको थियो ।
लगातार दुई खेलमा शानदार सुरुआत गरेको इटालीले प्रतियोगिता अगाडि नै पाएको उपाधि दाबेदारको उपमालाई आत्मसातसमेत गरेको छ ।
‘उनीहरूले खेलको सुरुआतदेखि अन्त्यसम्म खेल नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्,’ एभर्टनका पूर्व मिडिफिल्डर लियोन ओस्मानले भने, ‘उनीहरू बल पोसेसन नहुँदा के गर्छन् भन्ने विषयमा ठूला देशहरू छक्क पर्छन् । तर, आक्रामक पक्षमा भने उनीहरू एकदमै राम्रो टोली छन् ।’
‘उनीहरू ‘विनिङ मेसिन’ हुन् । तर, उनीहरूलाई यथार्थ रूपमा जाँच्नका लागि इटालीले साँच्चै बलिया टोलीसँग खेलेको छैन । यदि तपाई इटालीलाई प्रतियोगिताको सम्बन्धलाई लिएर मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने उनीहरूको परीक्षण हुन बाँकी छ । ठूला टोलीसँग अज्जुरीले कस्तो खेल्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’
यस्तै म्यानचेस्टर युनाइटेड तथा आयरल्यान्डका मिडफिल्डर रोए किनले इटालियन टोलीको प्रशंसा गरेका छन् ।
‘यो टोलीको बारेमा सबैभन्दा मलाई मन परेको पक्ष भनेको उनीहरूको अगाडि बढेर आक्रमण गर्ने शैली हो । तर, बल पोसेसन बिना उनीहरू जे गरिरहेका छन् र टोली पछाडि झरेर खेलिरहेका छन्, त्यो इच्छाशक्तिको नमुना हो,’ किनले भने, ‘जब उत्ृकष्ट खेलाडीहरू टोलीमा हुन्छन्, भोक र तिव्र इच्छा हुन्छ, गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुगिन्छ ।’
इटालीबाट युरो २००० को फाइनलसम्म पुगेका जियानलुका जाम्ब्रोटा भन्छन्, ‘स्वीटजरल्यान्डविरुद्धको खेलअघि टोलीबाट धेरै अपेक्षा थिए । तर, अब झन् धेरै अपेक्षा बढेका छन् । गाइज! यही ‘एटिच्युड’सहित खेलेर हाम्रो सपना पूरा गरिदेऊ ।’
‘उनीहरू आनन्द लिइरहेका छन् र जोखिम पनि मोलिरहेका छन्’
सहजतापूर्वक समूह ‘ए’ शीर्ष स्थान कब्जा गरेको इटालीका प्रशिक्षक मान्सिनीले आफ्नो टोलीको प्रदर्शनप्रति सकारात्मक टिप्पणी गर्दै अगाडि अझ कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘युरोपियन च्याम्पियनसिपमा फ्रान्स, पोर्चुगल, बेल्जियम जस्ता टोली छन् । तीमध्ये एक टोली विश्वकप विजेता हो र अर्को युरोपियन च्याम्पियन,’ उनले भने, ‘र, अर्को टोली विश्व बरियताकै शीर्ष स्थानमा छ । यी टोलीहरू वर्षौँ लगाएर बनेका छन्, र उनीहरू हामीभन्दा अझै अगाडि छन् । तर, यो फुटबल हो, यहाँ जे पनि हुनसक्छ । केही कुरा पनि निश्चित हुन सकिँदैन ।’
‘सबै खेल चुनौतीपूर्ण छन् । फिल्डमा गएर खेल्नैपर्छ । म यो मानेमा भाग्यशाली छु कि मेरो टोलीमा धेरै राम्रा खेलाडी छन् । उनीहरू खेल्न रुचाउँछन्, उनीहरू आनन्द लिन्छन् र जोखिम मोल्ने हिम्मत राख्छन्,’ मान्सिनी भन्छन्, ‘यी सबै कुराको श्रेय खेलाडीलाई जान्छ । मैले मेरो सोचाई र प्रक्रिया उनीहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेँ र अगाडि अझै लामो बाटो बाँकी छ ।’
सबै योजना अनुसार भइरहेको छ ?
नकआउटमा पनि इटालीसँग त्यस्तै आक्रामक क्षमता बाँकी रहन्छ ? त्यो समयले बताउने छ तर एउटा सानो कुरा मान्सिनीको टोलीको विरुद्धमा देखिएको थियो ।
सिरो इम्मोबिलेले इटालीबाट खेलेका पछिल्ला तीनै खेलमा लगातार गोल गरेका छन् । र, उनले प्रतियोगिताअघि उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गोल स्कोरिङ रेकर्डलाई लिएर उठेका सबै सवाल बन्द गरिदिएका छन् । त्यस्तै, भरपर्दा मिडफिल्डर मार्को भेराटी चोटग्रस्त भएपछि मान्सिनीलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो । तर, भेराटीको स्थानमा मौका पाएका म्यानुएल लोकाटेली स्वीटजरल्यान्डविरुद्धको खेलमा दुई गोलसहित ‘स्टार अफ दी शो’ साबित भए ।
‘डोमिनेन्ट’ इटालियन टोलीका लागि एउटा मात्रै दुःखद् पक्ष रह्यो, कप्तान जर्जियो केलिनीको इन्जुरी र फोस्र्ड सब्स्टिच्युसन रह्यो । केलिनीले स्वीटजरल्यान्डविरुद्धको खेलमा २४ मिनेट बिताएर सम्भावित ‘ह्यास्ट्रिङ’ इन्जुरीका कारण मैदानबाट बाहिरिनु परेको थियो ।
‘यो एकदम चिन्ताको विषय हो । आशा गरौं उनलाई जटिल समस्या देखिएको होइन । तर, ३६ वर्षको उमेरमा चोटिल भएर मैदानबाट बाहिरिनु समग्र प्रतियोगिताका लागि राम्रो कुरा होइन,’ फ्रान्सका पूर्वमिडफिल्डर प्याट्रिक भिएराले भने ।
प्रकाशित: २०७८ असार ४ गते १२:५०